निर्मलाको श्राप लाग्नेछ » Purbihotline
‘‘यो देश यतिबेला बलात्कारपछि हत्या गरिएकी ती अबोध नानी निर्मलाबाट श्रापित छ । निर्मलाको आत्माले यस देशको प्रहरी प्रशासन, शासक, बलात्कारी हत्यारा र तिनलाई बचाउन उद्यत सबैलाई श्राप दिइसकेको छ ।’’
दुशासनले सभामा द्रौपदीलाई घिसार्दै ल्याएका बेला द्रौपदी उसको हातबाट आफूलाई मुक्त गर्दै भीष्भ पितामह सामु जान्छिन् र अश्रुमिश्रित आक्रोशमा भन्छिन् – ‘‘आँखा चिम्लनु यो समस्याको समाधान हैन पितामह, म तपाईँकी कुलकी बुहारी द्रौपदी एउटा पातलो वस्त्रमा गुटमुटिएर ऋतु स्नान नगरी यो सभामा तपाईँलाई प्रणाम गर्छु र जान्न चाहन्छु, आज तपाईँ मलाई के आशीर्वाद दिनुहुन्छ ? तपाईँ त ज्येष्ठ गुरु, महावीर र श्रेष्ठ विद्वान हुनुहून्छ । भन्नुस् के तपाइले कुरु सिंहासनको रक्षा गर्नेमात्र प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो ? के कुरु मर्यादाको कुनै महत्व छैन ? तपाईँजस्तो महापुरुष र सुरवीरलाई प्रश्नहरूबाट भाग्न शोभा दिँदैन । पितामह ! मतिर हेर्नुस, किन मुन्टो झुकाउनुहुन्छ ? म कुरु मर्यादामाथि लागेको एउटा प्रश्न चिन्ह हुँ ।’’
आज निर्मलाको आत्माले पनि द्रौपदीले झैं यो देशका महान् क्रान्तिकारी वीर, चौध वर्ष जेल बसेका महान् ‘राष्ट्रवादी’ अनि बहुदलीय जनवादी ‘भीष्म’हरूलाई सोधिरहेको छ – ‘‘के तिमीहरूले आफ्नो सत्ता र सुख सुविधाको मात्र रक्षा गर्ने कसम खाएका हौ ? के यो देशका चेलीहरूको मर्यादाको कुनै महत्व छैन ? हे महान् बलीदानी क्रान्तिका नायक हो तिमीहरू समस्याबाट भाग्न पाउन्नौ, किन मुन्टो लुकाउँछौ ?’’
महादेवले श्री गणेशको शिरोच्छेदन गरेपछि पार्वतीको आक्रोशले तिनै लोक डगमगाएझैं अब एउटी कलिली बालिकाको चिचिलो चिच्याहटले यो देशको भाग्य डगमगाउनेछ । कसैले नदेखे पनि, देखिने कुरा लुकाउन खोजिए पनि यो विराट ब्रम्हाण्डको त्यो तटस्थ चेतनाले पक्कै निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको क्रूर दृश्य देखेको छ । निर्मलाको त्यो छटपटी, त्यो पीडा, त्यो दर्द, त्यो चिच्याहट र रोदन व्रह्माण्ड भर फैलिएको छ । अब त्यो भयानक विपत्तिका रुपमा यो देशमा फर्केर आउनसक्छ । यो पंक्तिकारको कुनै आग्रह या आवेग हैन । अस्तित्वको स्वभाव र नियम नै यही हो । पापको घडा भरिएर संसारमा अन्याय, अत्याचारले सीमा नाघेपछि दण्डहीनता, न्यायहीनता चरम उत्कर्षमा पुग्दा प्रलय प्रारम्भ हुन्छ । जताततै बलात्कारका घटना भइरहेका छन् । सुरक्षाको कतै अनुभूति छैन । न्याय र सुरक्षा दिने निकायमाथि नै कसैको विश्वास छैन । कुनै पनि देश या मानव सभ्यता विनाशतिर लम्केपछि यस्तै यस्तै लक्षणहरू देखा पर्छन् । यो देश यतिबेला बलात्कारपछि हत्या गरिएकी ती अबोध नानी निर्मलाबाट श्रापित छ । निर्मलाको आत्माले यस देशको प्रहरी प्रशासन, शासक, बलात्कारी हत्यारा र तिनलाई बचाउन उद्यत सबैलाई श्राप दिइसकेको छ । अब यो देशको बेथितिलाई लिएर हरेक नेपालीले उच्छ्वास प्रकट गर्दा ‘‘यो सतीले सरापेको देश’’ भन्ने छैनन् । बरु भन्नेछन् – ‘‘यो निर्मला पन्तले सरापेको देश हो ।’’
आजसम्म यो देशलाई सतीको श्राप लागिरहेको थियो । सतीको श्रापको असर कम हुन थालेपछि यो देशलाई भीमसेन थापाको श्राप लाग्न थाल्यो । भीमसेन थापाको श्रापको प्रभाव कम हुन थालेपछि यो देशलाई भीमदत्त पन्त र चिनियाकाजी श्रेष्ठको श्राप लाग्न थाल्यो । नमितासुनीताको बलात्कारपछि गरिएको हत्याकै श्राप लागेर हुनसक्छ शाह परिवारका सदस्यहरु भोज गरिरहेकै बेला गोली खाएर मर्नुप¥यो । उनीहरुको यो प्रारब्ध फललाई अन्तिम परिणतिमा पु¥याउन भलै राजनीतिक, वैवाहिक या प्रेमावेगका अन्य अनेक कारण किन नहून् ? नमिता सुनीताको चिचिलो रोदन नै उनीहरु र उनीहरुको सन्तानको जीवनमा प्रलय बनेर फर्केर आएको हुनसक्छ ।
बाँदरमुढेमा मारिएका ती अबोध र निर्दोष आत्माहरुको श्राप पक्कै पनि त्यो क्रुर हत्याकाण्डका नाइकेहरुलाई लाग्नेछ र एक दिन तिनको पनि ‘सत्यानाश’ भएको देख्नुपर्नेछ । यो पृथ्वी गोलो छ र यहाँ आफ्नो कर्मको प्रभाव एकदिन आफैतिर फर्केर आउँछ । बन्दुकको गोली आफैँतिर फर्किएझैं । अब हाम्रो देशलाई निर्मला पन्तको श्राप लाग्नेछ । जबसम्म निर्मला पन्तका बलात्कारी, हत्यारा र तिनका मतियार पक्राउ पर्दैनन् तबसम्म यो देशलाई साढे सातको दशाले सताइरहनेछ । यो देशलाई राहु, केतु, बृहस्पति वक्र, शनीको नकारात्मक असरले गाँजिरहनेछ । (पंक्तिकार पहिले भौतिकवादमा विश्वास राख्थ्यो र उसलाई जन्म, पुनर्जन्म, प्रारब्ध आदिमा विश्वास थिएन । अध्ययन र अनुभवबाट खारिँदै गएपछि अचेल लाग्छ – यो प्रारब्ध भन्ने कुरा हुँदोरहेछ । मानिसले आफ्नो कर्मको फल सके यही लोकमा, नभए मरेपछि परलोकमा भए पनि भोग्नुपर्छ ।)
न्याय पाउनु नागरिकको अधिकार हो । निर्मला पन्तको परिवारलाई न्याय दिन नसक्नेहरु माथि अस्तित्वले न्याय गर्नेछ । तिनको घरमा भीषण आगलागी हुनेछ र तिनका सारा सम्पत्ति नष्ट भई हरिकंगाल हुनेछन् । निर्मला पन्तको अधिकारका पक्षमा आवाज उठाउनेहरुमाथि लाठी, गोली र अश्रुग्यास वर्षाएर निर्दोष प्रदर्शनकारीको हत्या गर्नेहरूले संवेदनशील अंगमा संक्रमण भएर छटपटाएर बाँच्नुपर्नेछ । घटना ४८ दिन भइसक्दा पनि अनुसन्धान शून्यमै छ । राज्यको संरचना, अनुसन्धान संयन्त्र र सुरक्षा निकायलाई वास्तविक अपराधी को हो भन्ने पक्कै थाहा छ । अपराधी लुकाउन र निर्दोषलाई फसाउन । प्रहरी नै लागिरहेको देखिएपछि वास्तविक अपराधीबारे हाम्रो शासन प्रशासन अनभिज्ञ छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्न । यस हिसाबले अपराधी लुकाउन राज्य संयन्त्र नै प्रयोग गरिएको स्पष्ट हुन्छ । यसो हो भने निर्मलाको श्राप यो राज्यसत्तालाई पनि लाग्नेछ र यो देशलाई पनि लाग्नेछ ।
निर्मला पन्तका हत्यारा र बलात्कारी पक्राउ परेनन् भने यो देशको समृद्धिको सपना पनि पूरा हुनेछैन । निर्मलाको आत्माको श्राप लागेर यो देशमा महामारी फैलनसक्छ । नभए २०७२ वैशाख १२ को भन्दा ठूलो (दस रेक्टरकै) भुइँचालो आउनसक्छ र नव धनाढ्य शासक वर्गका आलिसान महल गल्र्याम्म ढल्नसक्छन् । अपराधी र तिनलाई जोगाउन लागि पर्नेहरूमाथि निर्मलाको श्राप लागेर सबै एकाएक दृष्टिविहीन हुनसक्छन् या उनीहरुलाई एकाएक पक्षघात पनि हुनसक्छ । अवोध चेलीको श्राप पक्कै लग्नेछ र यो आवेग हैन, पारलौकिक अस्तित्वको नियम हो । निर्मलाका अपराधी उम्किएका खण्डमा नेपाली जाति आगामि सयौं वर्षसम्म गरिबी र अभावकै दुश्चक्रमा फसिरहनेछन् र त्यतिबेला उनीहरु भन्नेछन, ‘‘यो नेपाल निर्मला पन्तले सरापेको देश हो ।’’(स्रोत ः बाह्रखरी वाट)
← तपाईलाई थाहा छ ? हवाईजहाजले १ लिटर इन्धनले कति उड्छ ? यो रोचक तथ्य जानी राखौ
सिटी स्क्यान गर्नुअघि ध्यान दिनुपर्ने कुरा →